musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles Inovhura Kuenda kuSouth Africa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Seychelles yakavhurazve vafambi veSouth Africa
Vashanyi vanobva kuSouth Africa vachakwanisa kukwira nendege kuenda kuzvitsuwa zveparadhiso zveSeychelles kubva musi weMuvhuro, Gunyana 13, Ministry of Health yeIndian Ocean yakazivisa munaGunyana 11.
Vapfuuri vanobva kuSouth Africa, vakabaiwa kana kwete, vanozobvumidzwa kupinda muzvitsuwa pasina kudiwa kwekuvharirwa kana vasvika.
Kupinda uye kugara mamiriro hakuzokanganisike neiyo COVID-19 mamiriro ekudzivirira.
vashanyi vanokurudzirwa zvakasimba kuti vabate majekiseni ekudzivirira zvizere vasati vafamba uye vachazoda kupa humbowo hweyedzo isina kunaka yeCOBV-19 PCR yakaitwa mukati maawa makumi maviri nemaviri kubva.
Mune ichangoburwa Hutano Kupinda uye Kugara Mamiriro eVafambi yekuvandudza (V3.5), South Africa inobviswa kubva kuSeychelles 'runyorwa rwe "Nyika Dzinorambidzwa," zvichireva kuti vafambi vanobva kuSouth Africa, vakabaiwa kana kwete, vachabvumidzwa kupinda muzvitsuwa vasina kudiwa kwekupatsanurwa paunosvika.
Sekureva kwezano, mamiriro ekupinda nekugara haazokanganisirwe nenjodzi yeECVID-19, asi vashanyi vanokurudzirwa kuti vange vachidzivirirwa zvizere vasati vafamba. Vapfuuri vachada kupa humbowo hweyakaipa COVID-19 PCR bvunzo yakaitwa mukati maawa makumi maviri nemaviri kubva uye zadzisa Hutano Hufambi Mvumo. Vanozofanirwa kupa humbowo hweinoshanda Inishuwarenzi Yekufamba & Hutano kuvhara COVID-19 inoenderana nekuzvitsaura, kuzviparadzanisa kana kurapwa.
Vashanyi vanobva kuSouth Africa vanosangana nematanho ari pamusoro anogona, ivo vachiri muSeychelles, gara mune chero zvivakwa zvekushanyirwa zvakasimbiswa zvisina hushoma hurefu hwekugara mukutangwa kwekutanga. Ivo havafanirwe kutora zvakajairwa Zuva re5 kuongororwa PCR Test2. Mamiriro ezvinhu ekugara kwevana vanosvika zera gumi nemanomwe, zvisinei nemamiriro avo ekubaiwa nhomba, zvichave zvemubereki / muchengeti wavari kuperekedza. Vashanyi vanga vari muBangladesh, Brazil, India, Nepal uye / kana Pakistan, nyika dzinosara paRinorambidzwa Runyorwa, mumazuva gumi nemana apfuura, zvisinei, havazobvumidzwe kupinda muSychelles.
Zviremera zvekushanyirwa kwezvitsuwa zveIndian Ocean zvakagamuchira nhau, pamwe negurukota rinoona nezvekunze uye Tourism Sylvestre Radegonde achiti anofara kuvhurwa kwemusika uye "mikana inopihwa nemusika unokosha uyu, kunyanya kunzira yekuredza nhunzi, uye kupfuura izvozvo kumusika weSouth America. "Nevanopfuura 71% yevagari vedu vakabayiwa nhomba zvizere uye kubayiwa majekiseni evachiri kuyaruka makore gumi nemasere kusvika gumi neshanu ari kuitika, Seychelles irikuita zvinodiwa kuchengetedza vanhu vayo nevashanyi vakachengeteka."
Seychelles inzvimbo inotsvagirwa vanhu vekuSouth Africa, iine kurekodha kuri pamusoro pe14,355 muna2017. Denda uye zvinotevera zvinorambidzwa zvakamisa kufamba uye kubva mukugadzira vashanyi 12,000 chirwere ichi chisati chavapo mu2019, vanosvika vakadonhera pasi pe2,000 gore rapfuura uye 218 kubva munaGunyana 5 gore rino.
Ipo vakapindwa muropa nemahombekombe uye madziva ekushambira, vafambi veSouth Africa vane ruzivo, uye vanofarira kufamba munzira dzezvisikwa, kukwira makomo, kukweva snorkeling, kudhizaira, kufamba nechikepe, vanoshuvira kusangana nevanhu vemo uye kutora chikamu mumitambo yezvaiitika pazororo.
Kubviswa kwezvirambidzo inhau dzakanakawo kune vanoverengeka varidzi vepamba veEden Island vanogara muSouth Africa avo vava kuzokwanisa kudzokera kuSeychelles nemhuri dzavo.
David Germain, Tourism Seychelles Regional Director we Africa & America uyo anogara muCape Town akakwazisa chiziviso nechido. “Idzi inhau dzinofadza, kuuya kwevafambi veSouth Africa kudzoka kumahombekombe edu kwakareba. Vafambi vanoda kugara vakachengeteka munzvimbo yakachena vachiri pazororo uye ndeipi nzvimbo iri nani kupfuura Seychelles panguva ino yekusagadzikana. Vashandi vezvekushanya nevashandi vavo vese vakadzidziswa kudzikisira uye kudzikisira njodzi inounzwa neCOVID-19, ichigadzira zviyero zvakajairika zvekushandira pamwe nekubatana nevakuru vehutano, vachiwana cheti-yakachengeteka yeCOVID. MuSouth Africa chaimo, kubaya nhomba kwevanhu vemuSouth Africa kwakatotanga uye kuri kuitika munyika yese, uye izvi zviri kukurudzira kuvimba mukufamba, ”akadaro.
Tourism Seychelles Hofisi muSouth Africa yakagadzirira nemabasa ekushambadzira akagadzirirwa kuitika muSouth Africa uye nedzimwe nyika dzeAfrica mumwedzi mishoma inotevera. "Izvi zvichasanganisira akateedzana ezvekutengeserana uye zvevatengi zviitiko, ne" Seychelles Africa Virtual Roadshow "iri iro basa guru, kupa zvigadzirwa nemasevhisi pamwe nekukosha kwekushambadzira kwekushambadzira kunharaunda yekuAfrica yekushambadzira nzendo yekuenda kuSeychelles," Mr. Germain akatsanangura. Chiteedzero che "Seychelles Virtual Kurovedzwa kudzidziswa," nzendo dzenhau uye kushanya kwekushanya kunozivikanwa kuSychelles zvakarongwa muna Mbudzi, pamwe nemishandirapamwe ekushambadzira kwevatengi, pamwe nekubatana kwekushambadzira kwekushambadzira nekutengeserana kwekufamba kweSouth Africa.
Kuti uwane zvakakwana ruzivo rwezvinodiwa, vese vashanyi vanofanirwa kubvunza Advisory.seychelles.travel uye seychelles.govtas.com uye usati wafamba.
Kune chero mimwe mibvunzo, ndapota nyorera [email inodzivirirwa] or [email inodzivirirwa]